Shir ka furmaya Baydhaba kadib fashilka shirkii uu iclaamiyey Farmaajo | Najah Media Network
Bogga Hore Wararka Manta Shir ka furmaya Baydhaba kadib fashilka shirkii uu iclaamiyey Farmaajo
Shir ka furmaya Baydhaba kadib fashilka shirkii uu iclaamiyey Farmaajo
Maalinta Talaadada ah ayaa la filayaa in magaalada Baydhabo ee xarunta maamul goboleedka Koonfur Galbeed uu ka furmo shir ay yeelanayaan Guddi farsamo oo uu soo magacaabay Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, Maxamed Xuseen Rooble.
Guddiga oo ka kala socda maamul goboleedyada ayaa ka arrinsan doona sababihii uu u fashilmay shirkii khilaafka doorashada ee dhawaan ay magaalada Dhuusamareeb ku yeesheen madaxda federaalka iyo dowlad goboleedyada iyo maamulka gobolka Banaadir.
Wasiirka Warfaafinta ee Koonfur Galbeed, Ilyaas Siciid Cali, ayaa BBC u sheegay “in 14-ka xubnood ee guddiga ay Bandhabo uga shiri doonaan arrimo farsamo, iyagoo turxaan bixin doona arrimhii looga wada hadlay shirkii Dhuusamareeb.
Sidoo kale wuxuu wasiirku sheegay in guddigan ay u gogol xaari doonaan kulanka xiga ee ay madaxda federaalka iyo maamullada isugu imaan doonaan.
“Shirka guddigan wuxuu daba socdaa kulankii magaalada Samareeb ka dhacay 3-dii February, waxaa kale oo uu gogol xaar u yahay shirka ay isugu imaan doonaan madaxda dalka.”
Maanta waxaa baaqday shirkii loo ballansanaa in uu ka furmo magaalada Garoowe, kaas oo uu ku dhawaaqay madaxweyne Farmaajo.
Kulankaas ayaa qabsoomi waayay kaddib markii Puntland iyo Jubaland ay dalbadeen in uu ka dhaco magaalada Muqdisho.
Maqaal horeMaxkamadda ciidamada oo xukun adag ku riday nin dil ka geystay Buurhakaba
Maqaal XigaSAWIRO:-Madaxweeyne Lafta gareen oo kulan laqaatay Gudi-Farsamo